सुहागरातको विहान वेहुलाको रहस्यमय मृत्यु ! – ebaglung.com
सुहागरातको विहान वेहुलाको रहस्यमय मृत्यु !
२०७५ असार १, शुक्रबार १९:०२	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, रुपन्देही २०७५ असार १ । ५ नम्वर प्रदेश अन्तरगत रुपन्देहीमा केहि दिन अघि एक युवा जवरजस्ती विवाहको अर्को दिन विहान मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका वडा नम्वर–७ अमुवा हिरागञ्जका ३२ वर्षिय कर्णबहादुर बुढाथोकीलाई स्थानिय अन्दाजी ३२ वर्षिया रुक्मणी खवास संग माया प्रेम रहेको भन्दै उनको समुदायले जेठ २४ गते विवाह गराएका थिए । त्यस विवाहलाई बुढाथोकीका परिवारजनले जवरजस्ती भनेका छन् ।
लामो समय देखि उनिहरु बिच प्रेम सम्वन्ध रहेको भन्दै ती युवतीका परिवारजनले बुढाथोकीको छिमेक मै आई उनलाई विवाह नगरे ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिई जवरजस्ती विवाह गराई दिएको बुढाथोकीका आफन्त नैनबहादुर लोकचनले बताए । ‘केटा र उनका परिवारले उनलाई विवाह गर्नै मानेका थिएनन’– उनले भने–‘ केटी पक्षको ठुलो जमात आई ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिए पछि विवाह गर्न बाध्य भएका थिए ।’
जवरजस्ती विवाह भएका कारण घरमा बस्न नचाहेर बुटवलको दोस्ती रेष्टुरेन्ट एण्ड लजमा उनिहरु दुवै जना बस्न गएका थिए त्यस रात । त्यस लजका सञ्चालक किरण पाण्डे संग सम्पर्क राख्दा उनले भने–‘ उनिहरु त्यस्तै साँझ ६ वजे तिर आएका थिए ।
१०८ नम्वर रुम बुक गरेका थिए । उनिहरु संग एक महिला सहित ८, ९ जना मानिसहरु पनि आएका थिए । अरु मानिसहरु राती साढे दश वजे सम्म मादक पदार्थ सेवन गर्दै बसेका थिए । केहि विवाद जस्तो पनि पाईन्थ्यो तर हामी त्यता पट्टि लागेनौ । उनिहरु सवै जना राती हिडे पछि उनिहरु दुई जना त्यस रुमा सुत्न गएका थिए ।
विहान त्यस्तै साढे ६ वजेतिर उनिहरु दुवै जना कोठाबाट निस्केर ढोका खोल्न लगाए । हाम्रो स्टाफले ढोका खोले पछि नवदुलही सामान किन्न भन्दै वाहिर निस्किईन । त्यस पछि वेहुला कोठा भित्र गए । उनि करिव २० मिनेटमा फर्किईन । कोठामा जाँदा चुक्कुल लगाएको देखे पछि स्टाफलाई बोलाएर ढोका हानेर खोल्दा उनि झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीलाई फोन हानेर बोलाएका हौ । ’
मृतक बुढाथोकीका परिवारजन उनको मृत्युलाई रहस्यमय भन्दै छानविनका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् ।
झुण्डिएको कोठाको ढोका खोल्दा चुक्कुल अडाउने किलाहरु नभाँचिनु, सेतो तन्नाको डोरी बनाएर पंखाको हुपमा नभई त्यसको पातामा डोरी थियो भनिनु, मृतकका परिवारजनलाई पहिला थाह नदिई केटी पक्षका मानिसहरुलाई बोलाई शव उठाउन, करिव डेढ घण्टा पनि लुम्विनी अञ्चल अस्पतालमा शव पुराए पछि मात्र आफुहरुलाई खवर गरिनुले उनको मृत्यु घटना रहश्यमय रहेको मृतकका परिवाजनको भनाई छ ।
घटनाका सम्वन्धमा वुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी केशव भट्टराई संग सम्पर्क राख्दा उनले परिवारजनले जवरजस्ती विवाहको दावी गरे पनि अनुसन्धानको क्रममा त्यस्तो नखुलेको बताए । उनले भने–‘ ती महिला संग बुझ्दा राजीखुशी विवाह गरेको खुलेको छ । २४ गते दिउँसो छिमेकीमा ती युवतीका आफन्तले स्थानियको एक घरमा ती युवा संग भेट गराएको उनले बताएकी छन् ।
उनले भनेकी छन–‘ हामी दुई जना संगै एक्लै कोठामा बस्यौं । विगतको माया प्रेमको कुरा सम्झेर दुवै जना धेरै वेर सम्म रोयौं । दुवैले विहे गरेर संगै बस्ने हामीले निर्णय गरेपछि सवैले ताली बजाएर स्वागत गरे ।
त्यहाँबाट हामी शिद्धवावा तिर आएर साँझ सम्म बस्यौ र होटलमा सुहागरात मनाउन भन्दै गएका थियौं । डिएसपी भट्टराईका अनुसार ती दुई जना होटलमा गई सकेपछि मात्र चार पाँच जना उनका आफन्त त्यस होटलमा पुगेका थिए । घटनाको गम्भीर ढंग संग अनुसन्धान भई रहेको र ती होटलमा पुगेकाहरु संग सोधपुछ हुदै गरेको डिएसपी भट्टराईलेबताए ।
विवाहको साँझ होटलमा पुगेका बुढाथोकीका साथी कमल भट्टराईले त्यस दिन साँझ उनिहरु हाँशी खुशी रहेको बताए । उनले भने–‘ उनि र म २२ वर्ष देखि निर्माण क्षेत्रमा संगै काम गर्दै आएका थियौं ।
उ मेरो मुटु थियो । ति केटी थारु समुदायकी हुन् । १२–१५ वर्ष देखि उनि संग माया प्रेम थियो । तर गत एक वर्ष देखि उनिहरुको सम्वन्ध टाढिए पछि त्यहाँको समुदायले पटक पटक उनिहरुलाई भेट गराउन खोजे ।
पहिला ती युवती संग विवाह नगर्न सुझाउने मान्छे भट्टराई थिए । तर पछि विवाह गर्न दवाव दिने मध्येका उनै हुन पुगे । यस विषयमा हामीलाई थुप्रै खाले आशंका छ । मृतककी आमा हिमकुमारी बुढाथोकीले विवाहका लागि पटक पटक दवाद दिदै आएको बताईन ।
उनि सहित मृतकको आफन्तले यतिका दिन देखि सञ्चार माध्यमा समेत यो घटना गापचुप पारिएको गुनासो गरे । बुढाथोकी र भट्टराई सुशिला निर्माण सेवा प्रा.लि संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरी ठेक्का पट्टा गर्दै आई रहेका थिए । मृतक बुढाथोकीको पुर्खेयौंली घर बागलुङको बुर्तिबाङ्ग हो ।
भानु माध्यमिक बिद्यालय ग्वालिचौरमा आज देखि विद्युतीय हाजिरी शुरु !
ढोरपाटन-बुर्तिबाङ सेवा समाज कतारबाट प्राप्त सहयोग रकम क्यान्सर पीडितलाई हस्तान्तरण